Vechidiki Vokurukura Nyaya dzeHutano nePabonde
Ndira 10, 2014
GWERU — Rimwe sangano rinoshanda kudzidzisa vechidiki vari muzvikoro zvepamusoro nyaya dzezvehutano nekodzero dzine chekuita nezvepabonde - kana kuti Sexual and Reproductive Health - rinoti zvakakosha kuti vechidiki ava vagare vachisangana vachitaura nezvenyaya idzi kuitira kuti vapane mazano ekupedza matambudziko akaita sekutapuriranwa kwezvirwere zvakadai seHIV/AIDS.
Vachitaura neStudio7 pakupera kwemusangano wevadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro muGweru neChishanu, mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano reStudents and Youths Working on Reproductive Health Action Team, kana kuti Saywhat, Muzvare Vimbai Mlambo, vanoti misangano yakadai yakakosha sezvo ichipa vechidiki ava mukana wekusangana vachitaura nezvematambudziko avanosangana nawo munyaya dzakakosha muhupenyu hwavo.
Muzvare Mlambo vanoti nekuda kwekuti mazuva ano mumhuri dzakawanda hamuchina vana tete, kana vana sekuru naana ambuya vanokwanisa kuraira vechidiki, sangano ravo rinopa vechidiki mukana wekuti wavane ruzivo rwavanofanirwa kuwana maererano nezvenyaya dzepaponde nehutano.
Sangano reSaywhat rinoita misangano yakadai kamwe chete pagore richisanganisa vadzidzi pamwe chete nevamwe vanhu vanenge vakamirira vakuru vakuru vezvikoro zvepamusoro kuti vakurukure pamusoro penyaya dzezvehutano pamwe chete nekodzero dzine chekuita nezvepabonde.
Musangano uyu, uyo wakatanga nemusi weChipiri, wange uchiitirwa paMidlands State Univeristy.
VaErnest Mwembe, avo vari kudzidzira hudzidzisi paHillside Teachers’College kuBulawayo ndemumwe wevadzidzi vange vari pamusangano uyu.
VaMwembe inhengo yechikwata chevadzidzi vechirume cheMugota/Ixhiba chiri pasi pesangano reSaywhat uyewo vari nhengo yeNational Coordinating Committee yesangano iri.
VaMwembe vanoti munguva yapfuura vakawanda vaikoshesa kutaura nezvehutano pamwe chete nekodzero dzine chekuita nezvepabonde kuvanasikana chete. Asi VaMwembe vanoti zvakakoshawo kuti vanhurume vechidiki vasasaririre munyaya idzi.
Muzvare Luccetta Chifamba vari kuita zvidzidzo zve Information Technology paHarare Polytechnic. Muzvare Chifamba ndemumwezve wevadzidzi vange vari pamusangano uyu, uye vari muchikwata chevadzidzi vechikadzi che Web for Life chinovewo pasi pesangano reSaywhat rekare.
Muzvare Chifamba vanoti kusangana kunoita vadzidzi uku hakungovape chete mukana wekuwonesana matambudziko avanosangana nawo munyaya dzeSexual and Reproductive Health muzvikoro zvepamusoro, asi kuti kunovapawo mukana wekupana mazano nekukurudzirana kuti vopedza sei matambudziko aya.
Mukuru weSaywhat, VaJimmy Wilford, vachema-chema nerekuti vatapi venhau vanongotaura chete nezvematambudziko anowira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vasingape mazano kana kuburitsawo zvakanaka zviri kuitwa nevadzidzi ava mukuedza kukunda matambudziko aya .
Vamwewo vanhu vange vari pamusangano uyu vanoti zvakakosha kuti masangano akaita seSaywhat asimbise kukosha kwakaita kuti vechidiki vasakurumidze kupinda munyaya dzekuita zvepabonde uye kuti vasadanane nevanhu vakawanda panguva imwe chete.
Musangano uyu wange uchiitwa pasi pedingindira rinoti “Turning Potential Into Action,” uye wakabatanidzwa nemhemberero yekucherechedza kusvitsa makore gumi kwesangano reSaywhat.